China Hot ukuthengisa BTO 22 incakuba oluhlabayo umzimveliso kunye nababoneleli |Jinshi
1-1 Y iposti
1-2 T isithuba
1-3 Isidiliya Trellis Post
1-4 iPosi yocingo loMbane
1-5 iPosi yomsila wehagu
I-1-6 i-post caps kunye nezixhobo
1-7 Isikrufu soMhlaba
1-8 isithuba somqondiso
2-1 Isango laseGadini
2-2 Ucingo lomthi
2-3 ikheji yeTomato
2-4 Inkxaso yezityalo
2-5 Umgquba wocingo
2-6 iigwegwe zocingo lwasegadini
2-7 isibiyeli seGadi
Isiseko se-SOD se-2-8
2-9 Garden Kneeler kunye neSitulo
2-10 Izixhobo zaseGadini
2-11 H isibonda
2-12 Ucingo lwaseGadini
2-13 Igridi yeGras
2-14 Isisefo soMnatha wegqabi
3-1 Amasango eNew Zealand
3-2 Live stock iyadi
3-3 Isango lomnatha wekhonkco
3-4 Welded isango lomnatha
3-5 Uthango lweegusha
3-6 iHorse Fence
3-7 Ucingo lwaseFama
3-8 Umzila kaloliwe
3-9 iiPaneli zeenkomo
3-10 Iphaneli yocingo
3-11 iPlastiki Poultry Net
4-1 ucingo oluBarbed
5-1 Iinja zenja ezidityanisiweyo
5-5 Ikheji yokugcina
5-7 Ikheji yoMvundla
6-1 ibhokisi Gabion
7-2 iRope Mesh
7-5 Ucingo Lwentsimi
7-7 iStainless Steel Wire Mesh
7-8 iCrimp Wire Mesh
7-9 Icwecwe Lesinyithi Eyandisiweyo
7-10 iHexagonal Wire Netting/Chicken Mesh
7-11 Ucingo lwekhonkco lwekhonkco / ucingo lweDayimane yocingo
8-1 PC isiseko 50cm
I-8-2 PC isiseko se-60cm
I-8-3 PC isiseko se-30cm
I-8-4 PC isiseko se-25cm
I-8-6 isiseko seplate ye-SS
10-3 iSolar Panel Mesh
11-1 i-Black Annealled wire
11-2 ngocingo lwentsimbi
11-3 Intsimbi yentsimbi etshisiweyo eshushu
11-6 U Uhlobo locingo
11-7 I-Coil wire encinci
13-1 Izixhobo zocingo
13-2 Wood isinxibelelanisi
Umgubo omnyama oqatywe ngentsimbi ...
6 X 3 X2M 4 x 3 x 2 m ezidibene...
Iphaneli yeSolar yeeNtaka Critter Gu...
Isiseko seentaka sentsimbi...
I-Insulation Hook-Up Wire PE ...
Kushushu ukuthengisa BTO 22 incakuba ngocingo oluhlabayo
I-Blade barbed wire, ekwaziwa ngokuba yi-scraper-type barbed wire, luhlobo olutsha lwemveliso yomnatha ekhuselayo enokhuseleko oluphuhlileyo kunye nokukwazi ukwahlula okuqinileyo.Ameva abukhali amile okwemela aphindwe kabini kwimilo ye-bellows, entle kwaye epholileyo.Idlale isiphumo esihle sokunqanda.Kwangaxeshanye, imveliso ineengenelo zembonakalo entle, isiphumo esihle sokuchasana nokuthintela kunye nolwakhiwo olulungeleyo.I-blade barbed wire isetyenziswa ngokubanzi kwiintolongo zokukhusela.Ngenxa yokuba i-blade ibukhali kwaye kunzima ukuyiphatha, inomphumela othile wokuthintela.I-blade barbed wire isetyenziswa kakhulu.Ingasetyenziselwa ukukhusela iindonga zabahlali kwaye ingasetyenziselwa indawo ebiyelweyo.Ucingo oluhlabayo lunempembelelo engcono yokuchasana nobusela kunocingo oluhlabayo oluqhelekileyo, kwaye ixabiso aliphezulu, ngoko ke ucingo oluhlabayo lusetyenziswa ngokubanzi. imveliso enokhuseleko oluphuhlileyo kunye nezakhono eziqinileyo zokuzihlukanisa.
Thumela i-imeyile Khuphela
Intsimbi yentsimbi, iGalvanized, intsimbi engenasici
I-Barbed Wire Coil
5000 amaqhekeza / amaqhekeza ngeveki
Iphepha elikhusela ukufuma ngaphakathi kunye nebhegi elukiweyo ngaphandle
Ubuninzi (Iimitha) 1 - 2000 2001 - 5000 >5000
Est.Ixesha (iintsuku) 7 12 Kuya kuthethathethwana
Ucingo lweConcertina / ucingo lweRazor
Iinkcukacha ezidumileyo :
Material; Galvanized, SS304,SS304L,SS316,SS316L Coil ubunzima: 7-20kg Coil ububanzi: 450mm, 730mm, 960mm, 980mm.Ubude bekhava: 8-50m
Uncedo lwentambo yencakuba :
1. Ikhono elinamandla lokuchasana nokunyuka kunye nokutshatyalaliswa okuphezulu.I-2, ineempawu ezintle, ezisebenzayo, ezifanelekileyo
uthutho kunye nofakelo.3. Umhlaba kufuneka ulungelelaniswe nomhlaba ngexesha lofakelo, kunye nendawo yokudibanisa
kunye nekholomu inokulungelelaniswa phezulu naphantsi njengoko umhlaba ukhuphuka kwaye uwela.4. Ukongeza ii-stiffeners ezine zokugoba kwicala elithe tye kwisikhululo seenqwelomoya umnatha wokulinda, ngelixa ixabiso lilonke linganyuki kakhulu, amandla omnatha kunye nobuhle bonyuka kakhulu.Yenye yezona zidumileyo ekhaya nakwamanye amazwe.
UHebei Jinshi ulinganiselwe njengeshishini elikhethekileyo ekuveliseni nasekuthumeleni kumazwe angaphandle uluhlu olupheleleyo lweemveliso zeRazor Barrier.
Inkunzi ebhalisiweyo yi-CNY20.5Million.Inkampani yethu iye yaba yinkampani ebanzi enabasebenzi abangama-200.Hebei Jinshi Limited iye yaba
ipasile ubungqina obusemgangathweni be-ISO9001:2000INkqubo yoLawulo loMgangatho weHlabathi weHlabathi.Uluhlu lweemveliso zeRazor ziye
ipasisiwe ubungqina obusemgangathweni yi-SGS.Igama elithi "Baffo" lenkampani yethu lichongwe njenge "Phawu loRhwebo oludumileyo" kwiPhondo.
liPhondo leHebei.Hebei Jinshi Limited iimveliso eziphambili: Electric Galvanized Razor Mesh, Hot Dip Galvanized Razor Mesh, PVC Coated
I-Razor Mesh kunye ne-Stainless Steel Razor wire, zonke iintlobo zocingo oluhlabayo
Ukupakishwa kunye nokulayisha :
1. Iphepha lobungqina bokufuma +Ibhegi elukiweyo ngomqulu ngamnye .Emva koko iikhoyili ezingama-50 zibotshelelwe kwi-bundle e-1
Ezinye iintlobo zocingo lwereazor :
Ngaphambili: Umgangatho Wokuthengiswa Okushushu 100 cm Ubude obuGalvanized Helix Pole Anchor
Okulandelayo: Factory hotselling incakuba ucingo BTO 22 uhlobo oluphezulu ukhuseleko incakuba ucingo
1. Ngaba unokunikela ngesampulu yasimahla?
UHebei Jinshi unokukunika isampuli yasimahla ekumgangatho ophezulu
2. Ngaba ungumenzi?
Ewe, besisoloko sibonelela ngeemveliso zobungcali kwindawo yocingo iminyaka eyi-10.
3. Ndiyakwazi ukwenza iimveliso?
Ewe, ukuba nje ukubonelela ngeenkcukacha, imizobo inokwenza kuphela oko ufuna iimveliso.
4.Njani malunga nexesha lokuhambisa?
Ngokwesiqhelo phakathi kweentsuku ezili-15-20, iodolo elungiselelweyo inokufuna ixesha elide.
5. Kuthekani ngemiqathango yentlawulo?
T / T (kunye ne-30% yediphozithi), L / C ekuboneni.Uwestern Union.
Nayiphi na imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.Siza kukuphendula kwiiyure ezisi-8.Enkosi!
I-200m roll yocingo oluhlabayo
Intsimbi engatyiwayo yentsimbi eNceku eNxweme ngencakuba yeteyiphu
8-16m Ubude obuPhezulu boKhuseleko lweRazor eBarbed Wire
I-Galvanized Razor Wall Spikes 1.25m yoKhuseleko
I-CBT-65 yeRazor eNxweme ngocingo / iTape yeTape...
PVC ukutyabeka Flat Weld Razor Wire Mesh
UTHETHWANO SIMAHLA +86013931128991
Idilesi Isakhiwo saseTianlin, isiXeko saseShijiazhuang, eTshayina